မျက်မှောက်နိုင်ငံရေးလောကဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ (၃)
၀၁ ဇူလိုင်၊ ၂၀၁၇
ဒီတပတ် English American Style Idioms ကဏ္ဍမှာ မျက်မှောက်နိုင်ငံရေးလောကမှာ သုံးနှုန်းနေတဲ့ အီဒီယံအသုံးတချို့ ဖြစ်တဲ့ No frills, To have each other’s backs နဲ့ To see red တို့ကို တင်ပြပေးထားပါတယ်။
(၁) No frills
No (မဟုတ်သဘောကိုပြတာ)၊ frills (အတွန့်အတက်တွေ၊ အတွန့်အလိပ်တွေ) ဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က အတွန့်အတက်တွေ မရှိတာ၊ အတွန့်အလိပ်တွေ မရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့မြန်မာမှာ အကျီင်္ တွေမှာပိုလှရအောင်၊ ပိုကြည့်ကောင်းရအောင်၊ အတွန့်အတက်တွေထည့်လေ့ရှိကြပါတယ်။ အတွန့်တွေမပါရင်တော့ရိုးရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ်ဘ၀မှာတော့လိုတာထက် ပိုပြီး ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်၊ ခမ်းခမ်းနားနားလုပ်တာ။ ငွေကုန်ကြေးကျ Grand style လုပ်တာမျိုးကို Frills အတွန့်အတက်တွေလို့ ရည်ညွှန်းပြောထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် No frills ရဲ့  အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်ကတော့ သာမန် အနေအထားထက် ပိုပြီးတော့၊ လိုတာထက် ပိုပြီးတော့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မလုပ်တာ၊ ငွေကုန်ကြေးကျခံ မလုပ်တာ၊ အပိုအလိုမရှိ ရှိသင့်ရှိထိုက်၊ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ အနေအထားမျိုးကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို အိန္ဒိယ သမ္မတ Narendra Modi က အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ မကြာမီကလာရောက်ခဲ့ ဝါရှင်တန်ခရီးစဉ်အတွင်းမှာ အိမ်ဖြူတော်အနေနဲ့ သိပ်ခမ်းခမ်းနားနားမလုပ်ဘဲ သာမန်အတိုင်းပဲ တွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ အတွက်ကြောင့်လဲ သတင်းမီဒီယာတွေက Modi ရဲ့  ခရီစဉ်ကို No frills visit လိုိ့ ရည်ညွှန်းသုံးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်သမ္မတ ချီကျင်းပင်၊ ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဆိုအားဘေးတို့ လာတုန်းက သမ္မတ Trump က သူ့ရဲ့  Florida ရှိ
Mar-a-lago အပန်းဖြေ စံအိမ်တော်ကြီးမှာ ခမ်းခမ်းနားနား ဧည့်ခံခဲ့ပေမယ့်လဲ အခု ဝန်ကြီးချုပ် Modi နဲ့က ဝါရှင်တန်ရှိ အိမ်ဖြူတော်မှာပဲ တွေ့ဆုံဖို့ရှိတာကို သတင်းထောက်တွေက ထောက်ပြပြီတော့ Modi’s no frills visit to Washington ဆိုပြီး သုံးနှုန်းခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
People were surprised that the millionaire heldano frills wedding for his daughter.
သန်းကြွယ်သူဌေးကြီးက သူ့သမီး မင်္ဂလာဆောင်ကို သာမန်ပဲ ကျင်းပပေးခဲ့တဲ့အတွက် လူတွေက အံ့သြသင့်ခဲ့ကြတယ်။
(၂) To have each other’s backs
To have (ဖြစ်တာ)၊ each other’s (တဦးနဲ့ နောက်တဦးရဲ့)၊ backs (နောက်ကျောတွေ) ဖြစ်ပြီး ၊ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ် နောက်ကျောအချင်းချင်း ကြည့်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ လူနှစ်ဦးဟာ တယောက်နဲ့တယောက် လိုအပ်ရင်ကူဖို့၊ အကူအညီ တောင်းလာရင်ပေးဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်တာ၊ တဦးရဲ့ အကျိုးကို တဦးကဆောင်ဖို့ အဆင်သင့်ရှိတာကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ခင်ဗျားလည်း ကျနော့်ကျောကြည့်၊ ကျနော်လည်း ခင်ဗျားကျောကြည့်ဆိုတဲ့အတိုင်း အချင်းချင်းကြားအပြန်အလှန်ကြည့်ရှူစောင်မဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို သမ္မတ Trump နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ အမေရိကန်နိုင်ငံကို လာရောက်တဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် Modi ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ သတင်းမီဒီယာတွေက ရေးသားခဲ့ကြရာမှာ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီး ဒီမိုကရေစီ နှစ်နိုင်ငံတို့ ဖြစ်ကြတဲ့ အမေရိကန် နဲ့ အိန္ဒိယတို့ဟာ ဘာကြောင့် တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံ ကူညီစောင်မဖို့ အဆင်သင့်ရှိတဲ့ကြောင်း ထောက်ပြရေးသာရာမှာ To have one each other’s backs ဆိုတဲ့ အသုံးကို ရည်ညွှန်းသုံးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
John, if you ever need help, just let me know. I always have your back.
John ရေ ၊ ခင်ဗျား အကူအညီလိုရင် ကျနော့်ကို ပြောနော်။ ကျနော် ခင်ဗျားကို ကူညီဖို့ အမြဲအဆင်သင့်ရှိတယ်။
(၃) To see red
To see (မြင်တာ)၊ red (အနီရောင်) ဖြစ်ပြီး၊ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က အနီရောင်ကို မြင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးက Spain နိုင်ငံမှာ နွားသိုးနဲ့ သတ်တဲ့ Bull fighting အားကစားဖျော်ဖြေမှုကနေ ဆင်းသက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နွားသိုးကို လှောင်ထားတဲ့ဆီကနေ လွှတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ နွားသိုးက ကွင်းထဲကို တဟုန်ထဲ ခုန်ပေါက်ပြေးထွက်လာပြီး မြင်ရာရာကို ဝှေ့ဖို့ပြင်ရာမှာ နွားသိုးနဲ့ပြိုင်သတ်တဲ့လူ (Matador) က ပုဝါအနီကို ဖြန့်ပြလိုက်တာနဲ့ နွားသိုးက အနီကိုမြင်ပြီး ဒေါသထွက်ခါ၊ အဲဒီလူဆီကို တချိုးထဲပြေးပြီး ဝှေ့ဖို့ ကြိုးစားရာမှာ အဲဒီလူက လှံနဲ့ နွားသိုးရဲ့ နံရိုးကြားကို ထိုးသတ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ သွေးထွက်သံယိုပွဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အနီရောင်ဆိုတာအန္တရာယ်ကိုရည်ညွှန်းသလို၊ဒေါသထွက်စရာကိုလဲရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးရဲ့ အီဒီယံ အဓိပ္ပါယ်ကလူကို ဒေါသဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရာကိုလုပ်တာ၊ မြင်စေတာ၊ ခံစားစေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ To see red အသုံးနဲ့ ပတ်သက်လို့ Maryland ပြည်နယ်ရှိ Rockville မြို့ မှာ မြို့ အာဏာပိုင်တွေက လူမျိုးပေါင်းစုံ နေထိုင်တဲ့ သူတို့မြို့ ကို ထူးခြားစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အလံ အပြင် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် (၁၉၃) နိုင်ငံက အလံတွေကိုလည်း မြို့ လယ်လမ်းတလျှောက်မှာ လွှင့်ထူဖို့ ကြိုးစားခဲ့ရာမှာ တချို့ မြို့ ခံလူတွေက ဘဝင်မကျ ဖြစ်ခဲ့ကြပြီး ဒေါသထွက်ခဲ့ကြတာတွေ ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် ၊ အလံတွေကြောင့်တချို့ကဒေါသထွက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီး၊ Some see red over flags လို့ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ရည်ညွှန်းသုံးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
John saw red when he noticed one of the customers cut in front of the line.
တန်းစီနေတဲ့ ဈေးဝယ်သူတွေကြားကို လူတဦးက ရှေ့ ကိုကြားဖြတ်ဝင်ဖို့ ကြိုးစားတာကို သတိထားမိတော့ John က ဒေါသထွက်တော့ပေါ့ ။
ဒီသတင်းပတ် တင်ပြခဲ့တဲ့ idiom အသုံးတွေက No frills, To have one each other’s backs နဲ့ To see red တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
မျက်မှောက်နိုင်ငံရေးလောကဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ (၂)